Imbali Yeenqwelo-moya - i-Gliders Fumana ii-Engines
Imbali Yendiza: Ukususela kwiKites ukuya kwiJets
Imbali yecala ibuyela emva kweminyaka engaphezu kwe-2,000, ukusuka kwiifom zokuqala ze-aviation, i-kite kunye nokuzama ukuxumla kwinqaba, ukuhamba ngeenqwelo zokuhamba ngokuxhaswa kwamandla, ukuqhuma kuninzi-moya.
Malunga no-400 BC - Uhambo lwenqanawa eChina
Ukufunyanwa kwekite eyayingakwazi ukundiza emoyeni ngamaTshayina yaqala abantu bacinga ngokuhamba. AmaKites asetyenziswa ngamaTshayina kwimikhosi yonqulo. Bakhele ama-kite amaninzi amnandi ukuzonwabisa, kwakhona. Ezinye iikites eziyinkimbinkimbi zisetyenziselwa ukuvavanya izimo zemozulu. I-Kites ibalulekile ekuqalisweni kwendiza njengoko babeyi-forerunner kwiibhaluni kunye ne-gliders.
Abantu Bazama Ukuhamba njengeentaka
Kwiminyaka emininzi, abantu baye bazama ukubhabha njengeentaka kwaye bafunde ukuhamba kweentaka. Amaphiko ayenziwe ngamagqabi okanye imithi ephantsi yokutyeba ifakwe kwiingalo ukuvavanya amandla abo okubhabha. Iziphumo zazihlala zicekelekile njengoko izihlunu zengalo zomntu azifani neentaka kwaye azikwazi ukuhamba ngamandla entaka.
Hero kunye neAeolipile
Injini yamandulo yamaGrisi, iHero yaseAlexandria, yayisebenza ngogonyamelo lomoya kunye ne-steam ukudala imithombo yamandla. Enye into ayilungileyo yayiyi-aeolipile eyayisebenzisa iijetshi ze-steam ukuze zenze ukunyakaza okujikelezayo.
IHarri yaphakamisa indawo ephezulu kwibheke yamanzi. Umlilo ngaphantsi kwetaleta wawuguqula amanzi ibe yimpompo, kwaye igesi yahamba ngemibhobho kummandla. Iibhubhu ezimbini ezenziwe nge-L kumacala athile macala alo mkhakha zavumela igesi ukuba ibaleke, eyayibeka inqaku kulo mkhakha owabangela ukuba ijikeleze. Ukubaluleka kwe-aeolipile kukuba ibonisa ukuqala kwenjini eyenziwe - injini eyenziwe ukunyakaza kuya kubakho kamva kubalulekile kwimbali yendiza.
1485 uLeonardo da Vinci - i-Ornithopter kunye noFundo lweNqwelomoya
ULeonard da da Vinci wenza izifundo zokuqala zangempela-moya kwi-1480. Wayenemifanekiso engaphezu kwe-100 ebonisa iimfundiso zakhe kwiintaka kunye nokuhamba kwendiza. Imizobo ibonisa amaphiko kunye nomsila weentaka, iingcamango zemishini yokuphatha abantu, kunye nezixhobo zokuvavanya kwamaphiko.
Umshini ohambahambayo awuzange wenziwe. Kwakuyilwe uLeonardo da Vinci wadala ukubonisa indlela umntu angabaleka ngayo. I-helicopter yemihla yanamhlanje isekelwe kule ngcamango. Iincwadi zeencwadi zikaLeonardo da Vinci zendiza zaphinda ziphinda zihlolwe ngekhulu le-19 ngeenkonzo zoovulindlela.
1783 - UJoseph noJacques Montgolfier - I-Flight of the First Air Balloon yokuqala
Abazalwana, uJoseph Michel kunye noJacques Etienne Montgolfier, babeyi-inventors ye-balloon yokuqala yokushisa. Basebenzisa umsi emlilweni ukuvuthela umoya oshisayo kwindawo ye-siki. Isikhwama sesilika sasifakwe kwisitya. Umoya oshisayo wavuka waza wavumela ibhaluni ukuba ibe lula-kunokuba-moya.
Ngo-1783, abagibeli bokuqala kwibhaluni enemibala babengumvu, i-rooster kunye nedada. Yakhuphukela kwindawo ephakamileyo malunga neenyawo eziyi-6 000 kwaye yahamba ngaphezu kweeyure enye.
Emva kolu phumelelo lokuqala, abazalwana baqala ukuthumela amadoda ebhaleni lomoya oshisayo. Uhambo lokuqala lwaba ngoNovemba 21, 1783, abagibeli babe nguJean-Francois Pilatre de Rozier noFrancois Laurent.
1799-1850 - uGeorge Cayley - iGliders
INkosi uGeorge Cayley ithathwa ngokuba nguyise we-aerodynamics. UCayley wazama ukuklanywa kwephiko, eyahlukileyo phakathi kokuphakamisa kunye nokudonsa, yenze iikhontrakthi zemizila engumsila, ama-rudders ajikelezayo, ama-elevator angemuva, kunye ne-screws. UGeorge Cayley wasebenza ekufumaneni indlela umntu angabaleka ngayo. UCayley wenza iinguqu ezininzi ezahlukahlukeneyo ezisebenzise ukuhamba komzimba ukulawula. Umfana omncinci, ogama lakhe lingaziwa, wayengowokuqala ukuphanga elinye lababalandeli beCayley, umqhubi wokuqala onokuthwala umntu.
Kwiminyaka engaphezu kwe-50, uGeorge Cayley wenza uphuculo lwabadlali bakhe. UCayley watshintsha ukuma kwamaphiko ukuze umoya ugijime phezu kwamaphiko ngokuchanekileyo. UCayley wenzelwe umsila we-gliders ukunceda ngokuzinza. Wazama i-design biplane ukuba yonge amandla kwi-glider. UGeorge Cayley waqaphela ukuba kuya kuba nemfuneko yamandla omatshini ukuba i-flight yayiza kubakho ixesha elide.
UGeorge Cayley wabhala ukuba inqwelo-moya ehleliweyo eneenkqubo zombane yokuqhubela phambili, kunye nomsila ukunceda ekulawuleni kwindiza, kuya kuba yindlela efanelekileyo yokuvumela umntu ukuba ahambe.
Injineli yaseJamani, u-Otto Lilienthal, wafunda i-aerodynamics kwaye wasebenza ukuyila i-glider eya kuhamba. U-Otto Lilienthal wayengumntu wokuqala ukuyila umqhubi onokubhabha umntu kwaye wakwazi ukuhamba ngeemitha ezide.
U-Otto Lilienthal wayenomdla ngombono wokubaleka. Ngokusekelwe kwizifundo zakhe zeentaka kunye nendlela ahamba ngayo, wabhala incwadi kwi-aerodynamics eyapapashwa ngo-1889 kwaye le ngxelo yayisetyenziswe ngabazalwana baWright njengesizathu sokuyila kwabo.
Emva kweenqwelo ezingaphezu kwama-2500, u-Otto Lilienthal wabulawa xa elahlekelwa ngumlawuli ngenxa yomoya oqhaqhaqhaqhaqha waza waphahla emhlabathini.
1891 uSamuel Langley
USamuel Langley wayeyi-physicist kunye neenkwenkwezi zesazi zeenkwenkwezi ezazi ukuba amandla ayadingeka ukuze kuncede umntu aphephe. ULongley wenza iimvavanyo ngokusebenzisa izibonda kunye neenjini zamanzi. Wakhela imodeli yendiza, eyayibiza ngokuba yi-aerodrome, eyayiquka injini ene-steam-power. Ngo-1891, imodeli yakhe yahamba nge-3/4 yeeyure ngaphambi kokuphuma kwamanzi.
USamuel Langley wathola isibonelelo sama-$ 50,000 sokwakha i-aerodrome epheleleyo. Kwakunzima ukuphaphaza kwaye kwaphazamiseka. Wadumala kakhulu. Wayeka ukuzama ukuhamba. Igalelo lakhe elikhulu kwiimvavanyo ezibandakanyekayo zokungenisa izityalo zombane. Wayeyaziwa ngokuba ngumlawuli we-Smithsonian Institute eWashington, DC.
1894 Octave Chanute
U-Octave Chanute wayengumqhubi ophumelelayo owaqalisa ukuveliswa kweenqwelo-moya njengento yokuzilibazisa, emva kokuphefumlelwa ngu-Otto Lilienthal. I-Chanute yenzelwe iindiza ezininzi, i-Herring-Chanute biplane yayiyilwe ngempumelelo yakhe kwaye yakha isiseko se-Wright biplane design.
U-Octave Chanute opapashwe "Inkqubela kwiMishini yeMaqhwama" ngo-1894. Waqokelela waza wahlalutya lonke ulwazi lobuchwepheshe angaluthola malunga nokufezekiswa kwendiza. Kwaquka bonke oovulindlela bezobugcisa behlabathi. Abazalwana baseWright basebenzisa le ncwadi njengesizathu sokwenza okubanzi kwezilingo zabo. UChanute wayedibanisene nabazalwana bakaWright kwaye wayehlala ephawula ngenkqubela yabo yobugcisa.
Ngowe-1903 Abazalwana bakaWright - Uhambo lokuqala
U-Orville Wright noWilbur Wright babenomdla kakhulu ekufuneni kwabo. Okokuqala, bachitha iminyaka emininzi befunda malunga nokuphuhliswa kokuqala kwendiza. Baye bagqiba uphando olunzulu malunga nantoni na abanye abenzi bokuqala abaye benza. Bafunda zonke iincwadi ezapapashwa ukususela ngelo xesha. Emva koko, baqala ukuvavanya iingcamango zakuqala ngeibhaluni kunye nama-kites. Bafunda malunga nendlela umoya oza kunceda ngayo ukuhamba kwendlela kunye nokuba unokuchaphazela njani indawo ephakamileyo kwangoko.
Isinyathelo esilandelayo kwakuyikuvavanya imilo ye-gliders njengawe uGeorge Cayley xa evavanya iindidi ezahlukeneyo ezaza kuhamba. Bachitha ixesha elide lokuvavanya nokufunda malunga nendlela i-gliders ilawulwa ngayo.
Abazalwana baseWright baqulunqe basebenzisa umbhobho omoya ukuvavanya imilo yamaphiko kunye nomsila we-gliders. Emva kokuba bafumene ifom ye-glider eqhubekayo ihamba kwiimvavanyo kwiingqungquthela zaseNorth Carolina zangaphandle zeeBhanki, zatshintsha ingqalelo indlela yokudala inkqubo yokuqhubela phambili eyayiza kudala ukuphakanyiswa okufunekayo ukuba iqhube.
Injini yokuqala ababeyisebenzisayo eyenze i-horse 12.
"I-Flyer" iphakanyisiwe ukusuka kumgangatho wendawo ukuya ngasenyakatho ye-Big Kill Devil Hill, ngo-10: 35 ekuseni, ngomhla kaDisemba 17, 1903. U-Orville wahlola indiza eyayingama-pounds angamakhulu mathandathu anesihlanu.
I-flight first-than-air flight yahamba ikhulu elinamanci mabini kwiimitha ezilishumi elinesibini. Abazalwana babini batshintshana ngexesha lovavanyo lweenqwelo. Kwakungokujika kuka-Orville ukuvavanya indiza, ngoko nguye umzalwana obizwa ngokuba yi-flight first.
Abantu ngoku banako ukuhamba! Ngethuba leminyaka elizayo, ezininzi iindiza ezintsha neenjini zaphuhliswa ukunceda abantu, imithwalo, imithwalo, abasebenzi basejoni kunye nezixhobo. Inkqubela yekhulu lama-20 yayisekelwe kulo moya wokuqala kwiCatrick Hawk ngabazalwana baseMerika base-Ohio.
Abazalwana bakaWright - iintaka zeentsiba
Ngowe-1899, emva kokuba uWilbur Wright ebhale incwadi yokucela kwi-Smithsonian Institution ngolwazi malunga neemvavanyo zendiza, abazalwana bakaWright badiza iinqwelo zabo zokuqala: umncinane, umqhubi wendiza ugeleza njengekite ukuvavanya isisombululo sabo sokulawula i-craft ngo-wing warping . Ukuxabana kwephiko kuyindlela yokugubungela ama-wingtips ngokukhawuleza ukulawula ukunyakaza kwe-aircraft kunye nokulinganisela.
Abazalwana baseWright bachitha ixesha elide bejonga iintaka. Bayiqaphela ukuba iintaka zanyuka emoyeni kwaye umoya ogeleza phezu kwendawo ephilileyo yamaphiko awo yakha ukuphakama. Iinyoni ziguqula umlo wamaphiko azo ukuze ziphendukele kwaye ziqhube. Baye bakholelwa ukuba bangasebenzisa le ndlela ukuze bafumane ukulawulwa kwe-roll by warping, okanye ukuguqula umlo, inxalenye yephiko.
Abazalwana baseWright - Izigulane
Kwiminyaka emithathu ezayo, uWilbur kunye nomntakwabo u-Orville babeza kuqulunqa uluhlu lwee-gliders eziza kuhamba zimbini ezingabanjwanga (njengama-kites) kunye neenqwelo zokuhamba. Bafunda ngemisebenzi kaCayley, kunye neLangley, kunye neenqwelo zokuhamba ezihamba nge-Otto Lilienthal. Bahambelana ne-Octave Chanute malunga neengcamango zabo. Bayaqonda ukuba ukulawulwa kweenqwelo ezindizayo kuza kuba yingxaki ebaluleke kakhulu kunzima kakhulu ukuyicombulula.
Ukulandela ukuvavanya kwe-glider ephumelelayo, ii-Wrights zakhiwe kwaye zavavanywa isigidi esipheleleyo. Bakhetha uConfrey Hawk, eNorth Carolina njengendawo yabo yokuvavanya ngenxa yomoya, isanti, indawo ephakamileyo kunye neendawo ezikude.
Ngowe-1900, ii-Wrights zaphumelela ukuvavanya i-biplane-glider yayo entsha ye-biplane ye-50-pound kunye ne-wingspan yayo engu-17 kunye ne-wing-warping mechanism e-Kitty Hawk.
Enyanisweni, yayingumqhubi wokuqala wokuhlola. Ngokusekelwe kwiziphumo, abazalwana bakaWright baceba ukucocisa ukulawula kunye nokuhamba kweempahla, nokwakha umqhubi omkhulu.
Ngowe-1901, kwi-Kill Devil Hills, eNorth Carolina, kwi-Wright Brothers yabetha i-glider enkulu kunazo zonke eye yajikeleza, enama-wingspan angu-22, ubunzima beeplani ezili-100 kunye nezixhobo zokuhamba.
Nangona kunjalo, iingxaki ezininzi zenzeke: amaphiko ayenawo amandla okuphakamisa okwaneleyo; I-elevator phambili ayizange isebenze ekulawuleni i-pitch; kwaye indlela yokulwa nephiko ngezinye izihlandlo yabangela ukuba inqwelo-moya iphephe ukulawulwa. Ngenxa yokudumala kwabo, baxela ukuba umntu akayi kuphepha ebomini babo.
Naphezu kweengxaki zabo zokugqibela zokuzama ukuhamba, ii-Wrights zihlalutye iziphumo zazo zokuvavanya kwaye zenza ukuba izibalo abazisetyenzisiweyo azizange zithembeke. Baye banquma ukwakha i-tunnel yomoya ukuvavanya iintlobo ezahlukeneyo zephiko kunye nemiphumo yazo ekuphakameni. Ngokusekelwe kule mvavanyo, abaqambi babe nolwazi olubanzi malunga nendlela i-airfoil (iphiko) esebenza ngayo kwaye ingabala ngokuchaneka ngakumbi ukuba indlela ethile yokwenza iphiko yayiza kuhamba njani. Baceba ukuyila umshayeli omtsha ngamaphiko angama-32 kunye nomsila ukukunceda ukuzinzisa.
Abazalwana bakaWright - Ukuvalela iFlyer
Ngomnyaka we-1902, abazalwana bahamba ngeemvavanyo ezininzi zisebenzisa i-glider entsha. Izifundo zabo zabonisa ukuba umsila ohambayo unokuncedisa ukulinganisa i-craft kunye nabazalwana baWright badibanisa umsila ohambayo kwiinkambo zokuphelisa iphiko ukuze zilungelelanise. Ngokuphumelela kwee-glides ukuqinisekisa iimvavanyo zabo zomoya, abacebisi bacebe ukwakha i-aircraft enezixhobo.
Emva kweenyanga zokufunda indlela abaqhubi abasebenza ngayo iWright Brothers baqulunqe imoto kunye neenqwelo ezinobungqina ezintsha ezinokwaneleyo ukwenzela ukufumana ubunzima bomzimba neempawu. I-craft yayilinganisa ama-pounds angu-700 kwaye yaziwa ngokuba yiFlyer.
Abazalwana BakaWright - Uhambo Lokuqala Lokuhamba
Abazalwana bakhela umzila ohambayo wokuncedisa uFlyer. Lo mzila wehla wokukhupha uza kunceda inqwelo-moya ithole i-airspeed ngokwaneleyo ukuze ibhabhise. Emva kwemizamo emibini yokubhabhisa lo mshini, enye eyabangela ukutshatyalaliswa okuncane, u-Orville Wright uthatha i-Flyer nge-12-yesibini, ehamba ngokukhawuleza ngo-Disemba 17, 1903. Le yayisiza kuqala yindiza ephumelelayo, eyayiqhutywa yinkomfa.
Ngomnyaka we-1904, ukuhamba kwexesha lokuqala kwimizuzu engaphezu kwemihlanu kwenzeka ngoNovemba 9. I-Flyer II yaqhutyelwa nguWilbur Wright.
Ngomnyaka we-1908, ukuhamba ngeenqwelo zokugibela kwathatha umjikelo ngokugqithiseleyo xa kuqhuma umoya obulalayo wokuqala ngoSeptemba 17. U-Orville Wright wayeyihlola iindiza. U-Orville Wright wasinda ekuhlaseleni, kodwa umgibeli wakhe, uReal Corps uLieutenant Thomas Selfridge, akazange. Abazalwana baseWright baye bavumela abagibeli ukuba bahambe nabo ukususela ngoMeyi 14, 1908.
Ngowe-1909, uRhulumente wase-United States wathenga indiza yakhe yokuqala, i-Wright Brothers biplane, ngo-Julayi 30.
Inqwelo yathengiswa i-$ 25,000 kunye nebhonasi yee-5,000 zamaRandi kuba idlula 40 mph.
Abazalwana bakaWright - Vin Fiz
Ngomnyaka we-1911, iWrights 'Vin Fiz yayiyinqwelo yokuqala yokuwela iUnited States. Ukuhamba kwathatha iintsuku ezili-84, ukuma amaxesha angama-70. Ukuphahlazeka kwamanzi amaxesha amaninzi kangangokuba ubuncinci bezinto zokwakha zasekuqaleni babesesemzini xa befika eCalifornia.
I-Vin Fiz yaqanjwa ngegama le-soda yamagilebhisi eyenziwa yi-Armor Packing Inkampani.
Ngaloo nyaka, iNkundla yase-United States inqume ukuba inikwe abazalwana baseWright kwi-suitent ye-patent malunga no-Glenn Curtiss. Umbandela ochaphazelekayo ukulawulwa ngokulandelelana kweenqwelo-moya, apho ii-Wrights zigcinwe zigcina amalungelo. Nangona ukwenziwa kweCrississ, i-ailerons (isiFrentshi ngokuba "iphiko elincinane"), lalihluke kakhulu kwinkqubo yokulwa kwamaphiko eWrights, iNkundla inqume ukuba ukusetyenziswa kolawulo lwangaphantsi kwabanye "kwakungagunyaziswanga" ngumthetho welungelo lobunikazi.
UJohn Dunlop, uCharles Goodyear, kunye neMbali yeeTire
Funda ngoBomi boBomi be-Pizza
Ngubani owasungula i-Spinning Jenny?
UWilliam Sturgeon kunye neNtshintsho ye-Electromagnet
Iipopayi eziyi-10 eziphezulu zePost-Punk
Diglossia kwi Sociolinguistics
Ukuvakalisa amavoti aseSpain
Inkcazo kunye nemizekelo yokuchithwa
Ngubani owasungula indlu yokuzihlamba?
Yintoni Eyogubungela kwiGalofu?
Inkcazo ye-Anthropology Inkcazo
UC Curtis Ashford / uDonnell Turner | IGH Character kunye noMdlali
I-Visual Dictionary - Abasebenzi
Uluhlu lwezixhobo ezinamandla kunye nee-Acids
I-Togas, i-Tuxes, kunye neNinzi: Izihloko eziPhambili kwiKholeji yakho elandelayo yeKholeji
Ukuqonda amaHorticultural Societies
UMthetho woLondolozo lweMisa
Slash Biography kunye neProfayili
Hlangana noJames Van Allen
Biography kaMariya Funda
Umyalelo-jikelele-othe ngqo (ukwakhiwa)
Yintoni 'ibhola elingalunganga,' kwaye yintoni isigwebo sokudlala enye?
Indlela yokwenza iYast Yeast & Hydrogen Peroxide Volcano